ओ’मिक्रोन १० दिनभित्रै ३५ देशसम्म पुग्यो, यसबाट ब’च्न के गर्ने ? हेर्नुहोस् !!
दक्षिण अफ्रिकामा को`रोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमि,क्रोन भेटिएपछि कर्नाटकमा पनि बिहिबार यसका दुईजना संक्र`मित भेटिएका छन् ।हालसम्म नेपालमा भने यसबारे केही जानकारी छैन । २४ नोभेम्बरमा ओमि’क्रोन भेरियन्टको पहिलो संक्र’मित पुष्टि भएपछि ३ डिसेम्बरसम्म अर्थात् १० दिनभित्रै यो नयाँ स्ट्रेन ३५ वटा देशसम्म फै’लिसकेको छ ।
संसारभरी यसका करिब चारसय संक्र`मित भेटिएका छन् ।भारत र नेपालमा दोस्रो लहरका लागि डे’ल्टा भेरि’यन्ट जिम्मेवार ठानिएको थियो । नयाँ भेरि’यन्टको संक्रा`मकताको विषयतमा विज्ञले चेता`वनी पनि जारी गरिसकेका छन् । कतिले ओ’मिक्रोन डेल्टाभन्दा १० गुणा बढी गतीमा फै’लन सक्ने बताएको छ ।
नयाँ भेरियन्टको विषयमा संसारभरी डरको स्थिति छ र एकपटक पुनः प्रतिब`न्धको स्थिति निम्तिएको छ ।
१. ओमिक्रोन के हो र यसलाई भे’रियन्ट अफ कन्सर्न किन बताइयो ? को’रोनाको नयाँ भेरियन्ट ओ’मिक्रोनको पहिलो केस २४ नोभेम्बर सन् २०२१ मा दक्षिण अफ्रिकामा भेटियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको परीक्षण पश्चात् यसलाई भेरि’यन्ट अफ कन्सर्नको श्रेणीमा राखेको छ ।
सुरुवाती रिपोर्ट अनुसार ओमिक्रोन विभिन्न देशमा कहर निम्त्याइसकेको डे’ल्टा भेरियन्टभन्दा असाध्यै तीब्र रुपमा म्युटेशन गर्ने भेरि’यन्ट हो । हालसम्म ओमिक्रोनको ५० पटक म्युटेशन भइसकेको छ जसमध्ये ३० वटा त यसको स्पा’इक प्रोटिनमा भएको छ । स्पाइक प्रोटिन मार्फत् नै को’रोना भाइरस मानिसको शरीरमा प्र’वेश हुने गर्छ ।
यसको तुलनामा डेल्टाको स्पाइक प्रोटिनमा १८ वटा म्युटेशन भएको थियो ।ओमिक्रोनको रिसेप्टर बाइन्डिङ डोमेनमा पनि १० म्युटेशन भइसकेको छ जबकी डेल्टा भेरियन्टमा २ वटा मात्रै म्युटेशन भएको थियो । रिसेप्टर बाइन्डिङ डोमेन भाइ’रसको त्यो हिस्सा हो जुन मानिसको शरीरको सेलमा सबैभन्दा पहिले सम्पर्कमा आउँछ ।
डब्ल्यूएचओका अनुसार कोभिडको नयाँ भेरियन्टको पहिचानका लागि हालको परीक्षण विधि आ’रटी पिसिआर सही छ । आ’रटी पिसिआर विधि शरीरमा भाइ,रसको विशिष्ट जिनबारे पत्ता लगाउने गर्छ जस्तै स्पाइक (एस), इनवेलप्ड (ई) र न्यूक्लियोकेप्सिड (ए) । ओमिक्रोनमा स्पाइक जीन असाध्यै धेरै म्युटेट हुन्छन् । यस्तोमा यसको पहिचान सहज हुन्छ । यद्यपि, यसको पूर्ण पुष्टिका लागि जिनोम सिक्वेन्सिङ आवश्यक छ ।
३. नयाँ भेरियन्टको विषयमा स’तर्क रहन कति आवश्यक ?
डब्ल्यूएचओले विभिन्न अनुसन्धानपछि ओमिक्रोनलाई भेरियन्ट अफ कन्सर्न श्रेणीमा राखेको छ । भ्याक्सिन बनाउने कम्पनी मोडर्न र थुप्रै विज्ञले ओमिक्रोन भेरियन्टमा हालको भ्या’क्सिन प्रभावकारी नुहन सक्ने बताइसकेका छन् । यसबारे विभिन्न प्रकारको दाबी छ तर हालको व्यवस्था अन्तर्गत नै यसलाई रोक्ने काम गरिँदैछ ।
यद्यपि, थुप्रै कम्पनी यसको बुस्टर डोजका लागि पनि काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, थुप्रै प्रश्न अहिले पनि छन् जसमाथि अनुसन्धान जारी छ । ४. हामीले कस्ता सा”वधानी अपनाउनुपर्छ ? खोप अभियानलाई तीब्र्रता र परीक्षणको प्रक्रियालाई द्रूत गति दिएर यो भेरियन्ट बढ्नबाट रोक्न सकिने विज्ञ बताउँछन् । राम्रो तरिकाले मास्क लगाउनुका साथै सामाजिक दुरी, भीडभाडयुक्त स्थानबाट टाढै रहने र घर–अफिसमा राम्रोसँग भेन्टिलेशन बनाउनु यसबाट बच्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट तरिका हो ।
५. को`रोनाको तेस्रो लहर आउला ? दक्षिण अफ्रिकापछि नयाँ भेरियन्ट ३४ देशसम्म पुगिसकेको छ । यो रोगको गम्भी`रता अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । त्यसैले यो कति खत`रनाक हुनसक्छ यसबारे अहिले नै भन्न सकिन्नँ । भारतमा पनि यसका दुई संक्र`मित भेटिइसकेका छन् त्यसैले यो नेपालमा पनि भित्रिने सम्भावना प्रचुर छ । ६. के हालका भ्याक्सिन ओमिक्रोनवि`रुद्ध प्रभा`वकारी छन् ? विज्ञका अनुसार को`रोना महामा`री रोक्नका लागि हालका भ्याक्सिन प्रभा`वकारी छन् । ओमिक्रोन स्पाइक प्रोटिनमा असाध्यै धेरै म्युटेशन भइरहेको छ,
यद्यपि, विज्ञले केही नभएको स्थितिमा भ्या’क्सिनले मानिसहरुलाई नराम्रो स्थितिमा जानबाट रोक्न सक्षम भएको बताउने गरेका छन् । अर्थात् खोप लगाएपछि मृ`त्युको ख`तरा निकै क’म हुन्छ । त्यसैले सबैले खोप भने लगाउनुपर्ने विज्ञले बताउने गरेका छन् । रातोपाटी बाट
२०७८ मंसिर २१, मंगलवार प्रकाशित0Minutes 115 Views